Head coach Lalchand Rajput misses Zimbabwe's tour of Pakistan - Sportstar - Sportstar
The Zimbabwe head coach has not travelled to Pakistan with the team for the limited-overs series.
Mumbai 20 October, 2020 15:38 IST
Both Zimbabwe Cricket and Pakistan Cricket Board maintained that the former India cricketer Lalchand Rajput was issued a visa. - Vivek Bendre
Zimbabwe head coach Lalchand Rajput has not travelled with the team to Pakistan for the limited-overs series. The Zimbabwe Cricket claimed that the Indian Embassy in Harare wrote to them asking that Rajput be exempted from visiting Pakistan “in accordance with the travel guidelines stipulated by the Government of India for its citizens”.
In his absence, former Zimbabwe international, Douglas Hondo, will serve as the interim coach of the side for the three ODIs and three T20Is. The Zimbabwe team landed in Islamabad on Tuesday morning without Rajput, leading to speculations that there could have been visa issues.
However, in an official tweet, Zimbabwe Cricket claimed that the former India cricketer was issued a visa by the Pakistan Embassy in Harare. Rajput, however, was not available for a comment at the time of publishing this story.